UKUQHUBEKA KWEZIMPAWU: NGUBANI IQABANE ENDILINGANISAYO?
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba ngubani onethuba lokwenza isibini esigqibeleleyo? Ngena kwaye wazi yonke into malunga Ukuhambelana kwemiqondiso, Apha uyakufumana yonke into malunga neempawu kunye nokudibana ngokomqondiso.
1 Ukuhambelana kwemiqondiso
1.1 Iimpawu zomlilo
1.2 Imiqondiso yomhlaba
1.3 Iimpawu zomoya
Xa sithetha ngazo ukuhambelana komqondiso Sitsho ukuba kukho izinto ezithile phakathi komnye nomnye, ezi zinokuba mbi kwaye zilunge. Kwaye ke ngamanye amaxesha siyazibuza ukuba ingaba siya kuhlala kakuhle ngokwendalo, kwaye yeyiphi na. Ukuba unenkxalabo malunga noku, apha siza kubona ukuba yeyiphi imiqondiso ehambelanayo ngokwehoroscope yakho.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunenjongo: kusinceda ukuba sibe nolwazelelelo kungekuphela nje kwabanye kodwa nakwiziqu zethu. Kule meko, endaweni yokucinga "ngowuphi umqondiso ekufuneka ndizidibanise nawo, okanye loluphi olona lufanelekileyo", kungcono ufumane isitshixo kunxibelelwano lwealchemical olucetyiswa lulwalamano ngalunye kuthi.
Enye indlela yokufumanisa ukuba ilanga olungumqondiso olawulayo, kuba uhamba njenge-axis kwaye ungumququzeleli wobomi baseNatali.
Aries, Leo kunye neSagittarius. Banobudlelwane omnye nomnye. Njengomlilo, ezi ziqaqambile, ziyadanyaza, "ziyatsha," okanye abalinganiswa abonwabileyo. Kukho ubudlelwane bendalo phakathi kwabo: banesingqisho esifanayo kwaye bayaqondana ngokutyibilikayo. Ziyacacisa, zenzekile kwaye zicacile, kwaye kufuneka bayithobise iminqweno yabo ngokukhawuleza kwaye baphile ngokucacileyo nangokuthe ngqo. Bavame ukuziva bediniwe kwaye bekruqukile, ngakumbi xa imeko ithatha ixesha elide, ifuna umonde, okanye kufuneka yoyise amaqhinga amaninzi.
Banesibonelelo esinomoya: iGemini, iLibra kunye neAquarius. Iimpawu zomlilo kunye nabantu bomoya babelana ngesitayile esibuyisiweyo kunye nesantya esikhawulezayo, ke ukhululekile. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha, ngenxa yokubuza ngokugqithiseleyo, ukukrokra okanye ukungathandabuzeki, banokuziva becaphukisa, kuba kunqabile ukuba bayeke ukucinga ngeendlela ezininzi.
Banokudideka nalawo amanzi: Umhlaza, iScorpio kunye nePisces: Ejongane nale miqondiso yobukhali bolwandle, isantya somlilo saziva "simile." Xa ujongene noloyiko, ukungathembani kunye nokusetyenziswa ngokugqithileyo kwamanzi, isibindi somlilo kunye nobukhali akuhambelani. Ukuba unokuyinyamezela le mpendulo ye-hypersensitivity, uya kuba nembono enovelwano ngakumbi kwaye iya kuba sisiqalo sothando nenkathalo. Intliziyo kunye nokuqonda, ukukhuthaza kunye nesibindi zenza i-alchemy ebalaseleyo enokuhlala ngokukuko kwiimeko ezahlukeneyo.
Banokungavisisani nabo basemhlabeni: iTaurus, iVirgo kunye neCapricorn: Ngenxa yobunyani obugqithisileyo kunye nokuthandabuza okusisigxina malunga nokuhamba ngokukhalipha, imvakalelo yokuqala iya icotha ngakumbi. Ngelixa becinezela isenzo sobundlongondlongo sokungazoli kunye nokungakhathali kunye nokulibazisa ukusebenza kwabo, bakwanxulumana nabo nokubhalisa kwiimeko eziyingozi okanye zongquzulwano. Ukuze ubunyamezele ubomi babo, umlilo kuya kufuneka ukhulise umonde kunye nobungqongqo obunzima. Ke ngale ndlela baya kuba nakho ukwakha iiprojekthi zoyilo kunye.
Siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda, ukuze uyazi i Iimpawu ezihambelana neVirgo, ngenisa ikhonkco.
Taurus, Virgo, kunye neCapricorn. Banobudlelwane omnye nomnye: Njengomhlaba, obu buntu buzinzile, buzolile, bomelele kwaye buqinisekile. Kukho ulwalamano lwendalo phakathi kwabo. Bajonge kakhulu, bayadityaniswa ngokuthe ngcembe kumava obomi, bathatha inyathelo ngenyathelo leemeko ezahlukeneyo kunye nekhonkco ngalinye, balumkile xa kusongezwa into okanye umntu owahlukileyo kwimeko-bume yabo, kwaye ngokubanzi abayeki ngokukhawuleza.
Banesidingo sokuzinikela, bayahambelana phakathi kwamagama kunye nezenzo, banesingqisho esizolileyo kwaye babona ubomi ngendlela efanayo, babelana ngokuxabisa ukuqonda komzimba.
Bathetha ngokutyibilikayo ngabantu bamanzi: Umhlaza, iScorpio kunye nePisces: Inxulunyaniswa ngokulula novakalelo lokwamkela abantu bamanzi. Babelana ngesantya esicothayo kuba ezi zinto zimbini zidinga ixesha lokuvula nokuthembana. Nangona kunjalo, abantu emhlabeni banokungqubana neemvakalelo ezigqithileyo zasemanzini, uloyiko olungenasiseko, okanye iingxelo ezisekwe kubuntu.
Ukuba ungayihlehlisa imfuno yakho engxamisekileyo yokuphumelela kunye nokufezekisa okusebenzayo, unxibelelwano lwamanzi luya kukuzisela ubutyebi beemvakalelo kunye nokuzimisela komntu. Oku ekugqibeleni kuya kubakhokelela ekubeni banike ingqwalaselo: "ingeniso engcono" kuzo zonke iinkalo zobomi babo.
Iimpawu zomoya: iGemini, iLibra kunye neAquarius: Nangona benenjongo kwaye benembono eyiyo ngobomi, basengasokola kukuhamba okungapheliyo okungapheliyo komoya, aba bantu baya kuphila ngokukhawuleza kakhulu, ukukhanya kunye nokungazinzi. Xa abantu abasemhlabeni besebenzisa inkululeko nokuzimela, abayeki kulwalamano nabo basemoyeni.
Bayakubizwa ngokuba ngamaxoki kwaye baya kuchatshazelwa sisixhobo sotshintshiselwano ngezimvo okanye izimvo. Ukuba bayalunyamezela utshintsho oluninzi kunye neziganeko ezingalindelekanga, ubuntu bomhlaba ngabantu abanesakhono sokuthetha-thethana, abanomdla kunye nabakude.
Banokungavisisani nokomlilo: ngee-Aries, ii-Leo kunye ne-Sagittarius: Baziva bephazanyiswa kukuxhokonxwa ngabantu abatshisayo kwaye kubangelwa kukulwa kwabo. Umntu olumkileyo nolumkileyo kufuneka afunde ukunyamezela iimpawu zomlilo ezichasene ngokungqongqo nokulumkisa. Ukuba unyamezele kolu tshintsho luhlala lutshintsha, umlilo uya kubutshisa ubomi bakho obukrelekrele ngobuchule kunye novuyo.
IGemini, iLibra kunye neAquarius. Banobudlelwane omnye nomnye: Njengomoya, banobuntu, bakhululekile kwaye abalinganiswa abangafumaneki. Kukho ubudlelwane bendalo phakathi kwabo, kwaye bayaqondana ngokutyibilikayo, kuba bafuna ukudibana nokwazi abantu abohlukeneyo kunye.
La ukuhambelana phakathi kwale miqondiso bathi ngokwendalo abaphumli, bavulekile kwaye bayakhangela, kwaye bakufumanise kunzima ukunyanzelisa impendulo yokuqala abayifumanayo. Iindlela ziyabacaphukisa kwaye bathanda ukubuza amasiko ezentlalo okanye usapho. Banengxaki yokulandela imigaqo okanye ukuhlala kwiindawo okanye iimeko ixesha elide.
Bathetha ngokucocekileyo kunye nomlilo: kunye nee-Aries, i-Leo kunye ne-Sagittarius: Uvavanyo olusebenzayo nolukhawulezayo luyahlangana. "Umoya utyisa umlilo", zihamba kunye kwaye zondla kunye, zizisa ubuchule obukhulu kunye novuyo. Ukusuka kwindlela yokuphila efanayo, abantu abasemoyeni kufuneka bafunde ukunyamezela ukuzibaxa izinto okanye ukuzingca okungaqhelekanga. Abantu bomlilo kufuneka bavale umsindo wabo okanye izinto ezizezinye, ezingafunekiyo, ezingenangqondo nezobuntwana ngokujonga emoyeni.